I-2019 ye-Peptide Degarelix eyaziwa kakhulu: Isiyobisi esisetyenziselwa umhlaza we Prostate
I-Peptide Degarelix powder: Isiyobisi sokwenyani esisetyenziselwa umhlaza webala le-Prostate
1. Yintoni uDegarelix?
2. Yeyiphi umgubo kaDegarelix osetyenziselwa?
3. I-Degarelix powder Mechanism yesenzo
4. Unxibelelwano lweDegarelix
5. Ngaba ukhona umngcipheko ukuba ndiyaphoswa yidosi ye-Degarelix okanye i-overdose?
6. Yeyiphi Iziphumo kunye nezilumkiso ezinokuthi zibangele uDegarelix?
8. Inkcukacha ezithe vetshe
Okwangoku, umhlaza webala lesinye waba sesinye sezifo ezisongela impilo yomzimba neyengqondo yamadoda. Ukuthintela kwangoko kunye nonyango kubalulekile ukuze kunyangwe esi sifo. I-Degarelix powder sisiyobisi esisebenzayo kunyango lomhlaza webala, kwaye kufuneka sithathe inyathelo lokuqala lokuqonda ulwazi olubalulekileyo ngalo ukuze silisebenzise ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo.
UDegarelix (I-214766-78-6) sisiyobisi sonyango esinciphisa inani lamahomoni emzimbeni, kubandakanya ne-testosterone. Ihlelwe phantsi kodidi lwamayeza abizwa ngokuba yi-gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor antagonists. Esi siyobisi senziwe ngepeptide siyaziwa ngegama lophawu "Firmagon". Oku kulandelayo kukuchaza kwayo:
Udidi lweziyobisi: I-GnRH i-Analogue; Umchasi we-GnRH; Antigonadotropin
Ifomula yekhemikhali: C82H103ClN18O16
Ubuninzi beMolar: I-1630.75 g / mol g · mol − 1
Iindlela zoLawulo: Inaliti engangeneki
Ukucekeceka: Iindlwana (70-80%), umchamo (20-30%)
Ukupheliswa kwesiqingatha sobomi: I-23-61 yeentsuku
I-Degarelix powder isetyenziselwa ukunyanga umhlaza we-Prostate cancer. I-FDA ivume iyeza kunyango lomhlaza weprostate kwizigulana zase-US kwi-24th NgoDisemba, 2008. Kwi-17th Nge-15 kaFebruwari, i-2009, iKhomishini yaseYurophu ilandela ngokufanelekileyo kwaye yamkela ichiza likaDegarelix ukuba lisetyenziswe kwizigulana ezingamadoda amadala ezinomhlaza ophambili we-prostate.
Qaphela oko Inaliti ye-Degarelix kufuneka ulawulwe ngugqirha okanye umongikazi kwindawo yezonyango. UDegarelix usenokusetyenziswa kwezinye iinjongo. ESweden, umzekelo, ichiza lifundelwa ukusetyenziswa njenge-arhente yokukhuphela imichiza ukuze ilimale aboni. Unyango lomhlaza webele kaDegarelix nalo luthathwa njengelolunye unyango lomhlaza wamabele emadodeni.
Ugqirha wakho unokucebisa olu nyango kwezinye iimeko. Ukuba awuqinisekanga ukuba kutheni usela eli chiza, kubalulekile ukuba uthethe nogqirha wakho. Njengamanye amayeza, akufuneki unike uDegarelix komnye umntu, nokuba ngaba uneempawu ezifana nezakho. Kungenxa yokuba eli chiza linokuba yingozi ukuba lithathwe ngaphandle kokuyalelwa ngugqirha.
(1) Kuya kufuneka uyazi into eyongezelelweyo ngaphambi kokuthatha uDegarelix
Oku kulandelayo zezinye izinto ezibalulekileyo ekufuneka uyazi ngaphambi kokuthatha amayeza:
UDegarelix unokubangela ukungacoceki kwamadoda. Ukuba ujonge ukuba ngutata kwixa elizayo, kubalulekile ukuba uthethe ugqirha wakho. Unokufuna ukucinga ngokugcina isidoda ngaphambi kokuba uqale unyango.
Eli chiza alamkelwanga ukuba lisetyenziswe ngabafazi. Abafazi abakhulelweyo akufuneki basebenzise eli nyango. Oku kungenxa yokuba ichiza linokwenzakalisa umntwana ongekazalwa. Abasetyhini abancancisayo, okanye abo banqwenela ukuba nabantwana, kufuneka bakuphephe ukusebenzisa eli liyeza. Ngapha koko, abafazi ngokubanzi akufuneki basebenzise uDegarelix.
Akukhuselekanga ukuthatha i-Degarelix ukuba unemeko yempilo ephantsi. Qiniseka ukuba umazisa ugqirha wakho ukuba une-QT syndrome ende, ingxaki enqabileyo yentliziyo enokubangela ukuba uthethe, ukubetha kwentliziyo ngokungaqhelekanga, okanye ukufa ngequbuliso. Kuya kufuneka kwakhona wazise ugqirha wakho ukuba unentliziyo, izintso, okanye isifo sesibindi. Chaza ugqirha wakho ukuba unamazinga aphezulu okanye asezantsi e-sodium, i-magnesium, potaziyamu, okanye i-calcium egazini lakho.
Kukwabalulekile ukuba uxelele usokhemisi wakho okanye ugqirha ukuba ngaba awulunganga amayeza athile okanye izithako. Oku kuyakwenza ukuba bazi ukuba ngaba ungahambelani nenaliti kaDegarelix.
(2) Idosi ye-Degarelix yesitofu
UDegarelix uza ngeendlela ezimbini:
I-120 mg vial: Vial nganye engasetyenziswanga iqulethe i-120 mg ye-Degarelix powder njenge-Degarelix acetate.
I-80 mg vial: Vial nganye esetyenziselwa i-80 mg ye I-Degarelix powder njengoDegarelix acetate.
UDegarelix uza ngefomu yomgubo, ekufuneka ixutywe nolwelo kwaye itofwe phantsi kolusu kwindawo yesisu, kwindawo ethile phakathi kweembambo kunye ne-waistline. Ukuqala kwakho ukufumana olu nyango, uya kunikwa inaliti ezimbini zika-Degarelix. Emva kwedosi yokuqala yenaliti yeDegarelix, uya kufumana inaliti enye ngexesha lakho lokulandela.
Idosi yokuqala ihlala i-Degarelix 240 mg ilawulwa njenge-2 sindano yangasese ka-Degarelix 120 mg nganye kwi-40 mg / mL. Emva kwedosi yokuqala, uya kufumana inaliti enye engaphantsi kwe-80 mg kuxinzelelo lwe-20 mg / mL qho ngeentsuku ze-28.
Xa uza kufumana inaliti ye-Degarelix, kuya kufuneka uphephe ukunxiba impahla eqinileyo, esinqeni okanye ibhanti esijikeleze isisu sakho apho kuya kubanjiswa khona inaliti. Emva kokuba ufumene inaliti yeDegarelix, qinisekisa ukuba isinqe sakho okanye ibhande lakho akubeki uxinzelelo kwindawo yenaliti. Kuya kufuneka ukhusele ukurabha okanye ukukrala kwindawo apho kufakwe ichiza.
Ukunyanga iimpawu zomhlaza we-Prostate oxhomekeka kwi-testosterone yokukhula kufuna inqanaba lokunyanzelwa kwehomoni rhoqo. Ukufezekisa oku, kunyanzelekile ukuba iDegarelix acetate ilawulwe ngokuchanekileyo njengoko icetyiswe ngugqirha.
Ukuqinisekisa ukuba iyeza likaDegarelix liyayinceda imeko yakho, kuya kufuneka ukuba uye kuvavanyo lwegazi rhoqo. Qiniseka ukuba ugcina lonke ulonyulo lwakho kunye nogqirha wakho.
Kufuneka uqaphele ukuba inaliti yeDegarelix inokuchaphazela iziphumo zovavanyo oluthile lonyango. Xa sele uphantsi kolu nyango, qiniseka ukuba uxelele ugqirha wakho ukuba ulifumene eli chiza xa usenza uvavanyo lonyango olulandelayo.
I-testosterone eyindoda kuthiwa yeyokukhulisa ukukhula kweeseli zomhlaza kwiprostate. Iziyobisi ezithintela i-testes ukuba zivelise i-testosterone ziyaziwa ukuba ziyacotha okanye ziyema ukukhula kweeseli zomhlaza kwi-Prostate. Kukho neziyobisi ezithintela isenzo se-testosterone ngokunqamla ukunikezelwa kwehomoni eyindoda kwiiseli zomhlaza.
I-Degarelix powder (214766-78-6) isebenza ngokunciphisa inani le testosterone eveliswe ngokwemvelo ngumzimba. Ikwenza oko ngokuthintela ii-receptors ze-GnRH kwi-pituitary gland kwingqondo. Oku kuthintela ukuveliswa kwehostinise yehomoni, ngaloo ndlela kuthintela iimvavanyo ekuveliseni i-testosterone.
Njengazo nje ezinye iziyobisi ezinomhlaza, uDegarelix unako ukunxibelelana namanye amayeza kunye neemveliso zamakhambi. Oku kulandelayo zezinye zeendlela zamachiza ezinokubangela ukusebenzisana xa zisetyenziswa kunye noDegarelix:
Iiproteni ezithile ze-kinase inhibitors
Iintsholongwane zeMacrolide ezichasayo
Ukukhetha i-Serotonin Reuptake Inhibitors
I-Disopyramide, phakathi kwabanye.
Xa sisetyenziswa kunye noDegarelix, amayeza athile anokunyusa umngcipheko wohlobo lwesigqi sentliziyo esingaqhelekanga esaziwa ngokuba sisongezo se-QT. Usemngciphekweni wokunyuka kwale meko imbi kangaka kunye neengxaki zayo ukuba:
Ngaba badala (iminyaka eyi-65 nangaphezulu)
Yiba nembali yosapho yesingqisho esingaqhelekanga sentliziyo okanye isifo sentliziyo
Yiba nembali yokufa kwentliziyo ngesiquphe
Ngaba ukubetha kancinci okanye ukubetha kwentliziyo
Ukwanda kwexesha lokuphumla kwe-QT
Ukhe wahlaselwa sisifo
Ngaba ne-calcium ephantsi, i-magnesium, okanye amanqanaba e-potassium
Ukuba unayo nayiphi na kwezi meko zilapha ngasentla, okanye uthatha amayeza athile ukulawula imeko yezempilo, kubalulekile ukuba uxelele ugqirha wakho ngaphambi kokuba usebenzise ichiza likaDegarelix. Qiniseka ukuba wazisa usokhemisi wakho okanye ugqirha malunga nonyango, amayeza e-the-counter, izongezelelo zesondlo, iimveliso zezamayeza kunye neevithamini ozithathayo okanye oceba ukuzithatha. Oku kuyakunceda ukukuthintela kumayeza anokubangela ukusebenzisana kweDegarelix.
Kubalulekile ukuba uxoxe nogqirha wakho malunga nemeko yakho yonyango kunye nonyango onokuthi uzithathe ngenxa yezizathu ezininzi. Okokuqala, iya kwenza ukuba ugqirha axoxe nawe ukuba ukusebenzisa eli liyeza namanye amayeza kunokuyichaphazela njani imeko yakho yonyango. Ugqirha wakho uya kukwazisa ukuba imeko yakho yezonyango ingayichaphazela njani i-dosa, kunye nokusebenza kukaDegarelix. Ugqirha wakho uya kukwazisa ukuba ngaba kuya kubakho uvavanyo olulodwa na.
Akukho mava eklinikhi kunye nemingcipheko enxulumene nokulahleka okanye ukusela ngokweqile kwiDegarelix. Nangona kunjalo, akufanele uyeke ukuthatha la mayeza ngaphandle kokubonana nodokotela wakho. Kwimeko apho uphosa ixesha lokujova inaliti yakho kaDegarelix, tsalela ugqirha wakho imiyalelo.
ukusukela UDegarelix acetate kufuneka ukuba ulawulwe ngugqirha, kunqabile ukuba kwenzeke into eninzi enokusetyenziswa. Kwimeko ye-Degarelix overdose, nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ubize iziko lakho lokulawula ityhefu okanye ufune unyango kwangoko. Zilungiselele ukubonisa okanye uxele oko uthathe, ubungakanani kuyo uyithathileyo, kwaye xa uyithathile.
Njengamanye amayeza amaninzi, iDegarelix inokubangela iziphumo ezahlukeneyo. Iziphumo ebezingalunganga zeDegarelix zinokuba zithobile okanye zibe nzima, kwaye zinokuba zexeshana okanye zizisigxina. Oku kulandelayo ziqhelekile Iziphumo ebezingalindelekanga zikaDegarelix, uninzi olungenamava kuye wonke umntu othatha amayeza:
Ubungakanani obuncitshisiweyo bamasende
Ukwanda kwesidingo sokuchama rhoqo
Ukuphendula kolusu kwindawo yesitofu, njengentlungu, ubomvu, ubunzima, ukudumba
Nangona uninzi lweziphumo ebezingalunganga zeDegerelix zingalunganga, zingakhokelela kwiingxaki ezinkulu ukuba ziqhubeka ixesha elide. Kubalulekile ukuba ufune uncedo lwezonyango xa unokubona ezi zinto zilandelayo ezinqabileyo, kodwa ezimbi kakhulu:
Amathambo entlambo okanye iintlungu
Ukuqaqanjelwa kwesifuba kunye nokudumba
Iimpawu ezinjengomkhuhlane, njengokukhohlela, umkhuhlane, ukubulala kunye nomqala obuhlungu
Spike kwi-cholesterol yegazi
Spike kuxinzelelo lwegazi
Kuba uDegarelix unciphisa ukuveliswa kwe testosterone, oko kunokubangela amanqanaba asezantsi eeseli ezibomvu, imeko eyaziwa ngokuba sisifo seengcongconi. Iimpawu zesifo sokudakumba zibandakanya isiyezi, ulusu olomileyo, ukudinwa okungaqhelekanga kunye / okanye nokuphefumla, kubalulekile ukuba unxibelelane nodokotela kwangoko. Ugqirha wakho uya kwenza uvavanyo lwegazi amaxesha ngamaxesha ukubeka iliso kwinani leeseli ezibomvu zegazi kwigazi lakho.
UDegarelix kuthiwa ukwandisa umngcipheko wesifo seswekile. Ukuba unesifo seswekile, kubalulekile ukuba uye kuvavanywa rhoqo ukubeka esweni amanqanaba eswekile yakho yegazi.
UDegarelix ukwaziwa ukwandisa umngcipheko we-osteoporosis. Inokubangela ukuba ithambo linciphe kwaye liphule ngokulula. Ukuba sele unengxaki yamathambo, kubalulekile ukuba umazise ugqirha wakho ukuze akwazi ukumisela ukuba imeko yakho yonyango ichaphazela njani na i-dgare yeDegarelix.
Abanye abaguli banokufumana iziphumo ebezingalindelekanga zikaDegarelix ngaphandle kwezi zidweliswe apha ngasentla. Ukuba ufumana nayiphi na impawu ekwenza ungakhululeki okanye ikuxhalabise, kungcono ukumbona ugqirha wakho ngaphandle kokulibazisa.
Ugqirha wakho unokukucebisa ukuba uyeke ukuthatha inaliti ye-Degarelix kwimeko yokuba uneempawu zokubetha kwentliziyo. Ezi mpawu zinokubandakanya ukuqaqanjelwa sisifuba ngequbuliso, iintlungu zibambe umva wakho, ukuziva uxinzelelo okanye ukuqina kwesifuba, ukubetha kakhulu, ukugabha, ukuqhula, kunye / okanye ixhala.
Ugqirha wakho unokukucebisa ukuba uyeke ukusebenzisa iDegarelix, ukuba ngaba uneempawu zokungalunganga. Ezi mpawu zinokubandakanya i-angioedema, ephawuleka ngamahashe, ubunzima bokuphefumla, kunye nokudumba kobuso, umlomo, izandla kunye / okanye iinyawo.
Kukho ezahlukeneyo Isilumkiso sikaDegarelix ukugcina engqondweni. Elinye lazo kukuba eli liyeza linokudlula kwizinto ezinamanzi emzimbeni (ukugabha, umchamo, ukubila, iifosili). Ke ngoko kuya kufuneka uphephe ukuvumela ulwelo lomzimba wakho ukuba lunxibelelane nezandla zakho okanye omnye umntu ulusu kunye namanye ama-surfers ubuncinci kwiiyure ze-48 emva kokufumana inaliti ye-Degarelix.
Abanakekeli bacetyiswa ukuba banxibe iigloves zerabha ezikhuselayo ngelixa becoca amanzi emzimbeni kwaye xa bephethe iimpahla okanye iidaptha ezingcolisekileyo. Impahla emdaka kunye nelinen kufuneka ihlanjwe ngokwahlukileyo kolunye uhlamba.
Ngelixa kukho ezinye iziphumo ebezingalindelekanga zikaDegarelix ukuba uzixhalabise, zikwakhona nezinye izibonelelo zeDegarelix onokuthi ujonge kuzo xa usebenzisa eli chiza. Kwizifundo zeklinikhi, kubonakalisiwe ukuba inaliti yeDegarelix inikezela ukunciphisa ngokukhawuleza kwamanqanaba e-testosterone kunolunye unyango lwe-hormonal therapy. Eli nyango aludli ngokubangela utyando lokuqala lwe-testosterone olunokubangela ukunyuka kweempawu okwethutyana.
Isibonelelo esinye seDegarelix kukuba ichiza lihlala linyamezelwe kakuhle, ngaphandle kophononongo luveze ukuba iziphumo zokungenisa inaliti zenzekile kwi-40 ipesenti ye-Degarelix iivesi zeqela le-1 yepesenti yeqela leuprolide. Ezi ziphumo zazinobuncinci okanye zimodareyithe, kwaye zenzekile ikakhulu emva kwenaliti yokuqala.
Idatha yangaphambili evela kwizifundo ezininzi zeklinikhi zibonisa ukuba ngokuthelekiswa ne-LHRH agonists, uDegarelix wayenxulunyaniswa nokusinda okuphezulu kakhulu kwi-1st unyaka wonyango. Inyani yokuba amathuba okunyanga ngempumelelo umhlaza webala lesibeleko aphakamileyo xa usebenzisa olu nyango sesinye sezibonelelo zikaDegarelix ezenza ukuba eli nyango lizame.
UDegarelix kunye notywala
Ukuthatha utywala ngamanani amancinci kubonakala ngathi akuchaphazeli ukuba luncedo okanye ukhuseleko lwe-degarelix. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uphephe ukuthatha izixa eziphezulu zotywala xa uthatha eli chiza.
Ukuba wena okanye umntu omthandayo unomdla wesifo se-Prostate, akungabazeki ukuba lolunye unyango olunokukhethwa. Esona sizathu sokuba unokukhetha utyando kukunyanga ngaphezu kwehomoni efana noDegarelix. Nangona kunjalo, nakuphi na umahluko weendleko uya kufikwa kwisibonelelo se-Degarelix.
Kusenokwenzeka ukuba uyazibuza ngendleko zeDegarelix. Ixabiso eliqhelekileyo lonyango lonyaka kunye noDegarelix limalunga ne- $ 4,400. Oku kuhambelana neendleko zonyango olunye unyango olukhoyo kumhlaza wesibindi. Ixabiso lenaliti le-Degarelix yenaliti ye-80 mg lijikeleze kwi- $ 519 yokubonelela ngepoda enye yenaliti. Iindleko ziya kuxhomekeka kwikhemesti oyindwendweleyo.
Unokufumana u-UDegarelix uthenge onlineIntengiso. Kuya kufuneka ulumke kakhulu xa uthenga ichiza elikwi-Intanethi. Qinisekisa ukuba uhlola ngokufanelekileyo imvelaphi kunye nokukhuthala ngaphambi kokuyalela ichiza kumthengisi okwi-intanethi. Qinisekisa ukuba umthengisi okanye ikhemesti eku-intanethi isemthethweni kwaye into abayithengisayo iyindlela esemthethweni nelicocekileyo yeso siyobisi.
UDegarelix kufuneka agcinwe kubushushu begumbi. Qiniseka ukuba uyalikhusela eli liyeza ekukhanya nasekunyameni. Njengamanye amayeza, gcina uDegarelix ngaphandle kwabantwana.
Musa ukulahla umgubo kaDegarelix kumgqomo wenkunkuma wasekhaya okanye emanzini amdaka, umzekelo kwindlu yangasese okanye ezantsi kwesinki. Buza ugqirha wakho okanye usokhemisi ukuba ungalahla njani amayeza aphelelwe lixesha okanye awasasebenzi.
UVan Poppel H, iTombal B, et al (Oktobha 2008). I-Degarelix: inoveli ye-gonadotropin-ekhulula i-hormone (GnRH) ye-receptor blocker-iziphumo ezivela kunyaka omnye, iimulticentre, i-randomised, isigaba sesibini sokufumana unyango kunyango lomhlaza webele. I-eur. I-Urol. I-54: 805-13.
I-US National Library of Medical Institutes National of Health, Uhlalutyo lweendleko kunyango lwe-avarelix kunyango lomhlaza oxhomekeka kwi-prostate cancer e-United Kingdom, Lee D1, Porter J, Brereton N, Nielsen SK, 2014 Apr; 17 (4 (233) ): 47-XNUMX.
UGittelman M, Pommerville PJ, Persson BE, et al (2008). U-1-unyaka, ilebhile evulekileyo, idosi yesigaba sesibini engalunganga yokufumana uvavanyo lwe-degarelix kunyango lomhlaza weprostal eMntla Merika. J. Urol. I-180: 1986-92.